Uyabuya umncintiswano wabaphila nokukhubazeka | News24
Uyabuya umncintiswano wabaphila nokukhubazeka
UThato Jonkoro ongumhleli womcimbi.isithombe: sithunyelwe
UKHUZA ibuya uzime wabantu abaphila nokukhubazeka eMgungundlovu obizwa ngokuthi yiNathi Sibahle Disability Beauty Pageant.
Lo zime uzoba e-Edendale Lay Ecumenical Centre e-Edendale mhla zingama-29 kuMandulo (September) kusuka ngehora leshumi ekuseni.
Ukungenele lo mcimbi kuzoba u-R150 umuntu ngamunye kanti ukungena emnyango khona u-R10 umuntu ngamunye.
Umhleli walo mcimbi uThato uthe inhloso yawo ukukhombisa abantu ukuthi nabo bangabantu abafana nawo wonke umuntu futhi nabo bayadinga ukuthi babonwe futhi baveze namathalente abo.
“Abantu kumele bazi ukuthi akukho okungalungile ngathi siyafana nawo wonke umuntu yize siphila nokukhubazeka. Kulo nyaka ngithathe isinqumo sokuthi njengomuntu omusha osemncane ngizinikele ekwenzeni lo mcimbi wabantu abakhubazekile.
“Kwesinye isikhathi abantu abaningi abakuqondi ukuthi kusho ukuthini ukuphila nokukubazeka ngakho sifuna ukubafundisa ukuthi akukho okubi ngathi. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi abantu bakucabangele ngoba bethi uphila nokukhubazeka.
“Kwesinye isikhathi baze bakwenze uzizwe sengathi awufanele ukuhlala emphakathini abahlala kuwo. Njengomuntu omusha ngifuna ukwenza izinto ngizenzele abantu abaphila nokukhubazeka emiphakathini yethu,” kuchaza yena.
Uqhube wathi sekungokwesibili enza umcimbi ofana nalona njengoba aqala ukuwenza ngonyaka ka-2016 nawuchaze njengowaba yimpumelelo.
Uma ungathanda ukungenela, amafomu ayatholakala eKuhlekwethu ku-Langalibalele Street kanye nase-Abahle Funeral Palour. Ngeminye imininingwane ungashayela le nombolo: 078 552 4057.